Fikarohana momba ny firaisana Ilay mpilalao sarimihetsika Lionel Barrymore sy ny playwright Oscar Wilde dia mamaritra ny fialam-boly sy ny fisiany ao amin'ny fiainana any an-danitra na any an-danitra
Loharano: Nampifandraisina tamin'ny alalan'ny feo mivantana avy amin'i Leslie Flint ny fifandraisana avy amin'ny maty tamin'ity tranga ity. George Woods sy Betty Greene dia nanatrika ny fotoam-piraketana ny fotoam-pivoriana tao Flint ary nanontany ny momba ny maty izy ireo, izay niteny tamin'ny feo voajanahary. Nijerin'i Neville Randall ireo rakitsary ireo ary namintina ireo fifanakalozan-kevitra tao amin'ny bokiny, Fiainana aorian'ny fahafatesana. Ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ilay lahatsoratra etsy ambany dia kely novaina mba hanatsarana azy kokoa.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny fomba fifandraisana amin'ny maty dia mandehana: Leslie Flint sy ny Medium Voice Voice
Manazava i Lionel Barrymore ny fahatongavany any amin'ny Tontolon'ny Fanahy
Nandritra ny fivoriana iray natao tamin'ny Feb 9, 1957, dia nisy feo nitendry ny American accent. Nanaiky ny feo i Betty Greene sy ny an'ny mpilalao sarimihetsika Lionel Barrymore, izay efa maty roa taona talohan'ny fampihorohoroana fony nijery tele tao amin'ny tranony Hollywood.
(Barrymore dia fanta-daza amin'ny anjara asany amin'ny banky ratsy, Mr. Potter, ao amin'ny sarimihetsika mahazatra, Fiainana mahatalanjona izany, izay i Jimmy Stewart no kintana. Ao amin'ny sary omena etsy ambony, mipetraka i Barrymore ary i Stewart dia mijoro amin'ny rantsantanana manondro an'i Barrymore).
Nanontany i Betty Greene: “Lionel Barrymore ianao, sa tsy izany?”
"Eny, ahoana no nahafantaranao izany?"
George Woods: "Rehefa nandalo fotsiny ianao, ahoana no nahitanao zavatra? Nahita an'ity tontolo ity ve ianao? "
“Eny, hiteny toy izany koa aho. Amin'ny lafiny sasany, mitovy amin'ny resaka natiora. Saingy azo antoka fa tsy nahita làlambe sy fiara ary karazana zavatra rehetra toy izany aho. Fa avy eo indray, azoko amin'ny sehatra ambany akaiky kokoa ny Tany, misy ireo zavatra ireo. Ny zava-drehetra dia raharaha iray amin'ny fanjakan'ny sain'ny olona izay mipetraka amin'io toerana manokana io.
Rehefa tonga teto aho dia nahatsiaro tena tsara tao amin'ny zaridaina tsara tarehy iray. Tsy tahaka ny zaridaina tiako be tamin'ny fahatanorako. Ary teo ny raiko sy ny reniko. Rehefa manokatra ny masoko aho, dia ny reniko no nahatsiaro azy fony izy vehivavy be zandrikely kokoa. Tena nahafinaritra izany.
Avy eo dia nisy namana maro tonga sy nampahafantatra ahy. Ireo olona efa fantatro tany am-piandohako.
Toa niaina tamin'ny traikefa voalohany niainako aho tamin'ny fihaonako tamin'ny olona izay nahafantarako ny lalana nodiaviko fony izaho mbola zazalahy kely. Araka ny fantatrao, rehefa nihalehibe aho, dia nanana tongotra mainty, ary nanahirana ny lalana iray sy ny iray hafa, ary matetika aho no nirotsaka an-tsehatra indray tamin'ny fahatanorako. Mieritreritra aho fa raha nandalo aho, dia ny eritreritro teto an-tany no nataoko tamin'ny taona lasa.
Manana alika eto aho fa tena tiako. Raha nisy olona nilaza tamiko taona maro lasa izay teto an-tany fa ny biby dia nisy aorian'ny fahafatesana dia tsy nino izany aho.
Tsy nino mihitsy aho fa nanana alika ny alika sy saka ary soavaly. Tsapako ankehitriny fa tompon'andraikitra amin'ny fanjakan'ny biby isika ary miankina amintsika bebe kokoa noho ny zavatra fantatsika.
Manana an'i John rahalahiko koa aho. Tsy nanafintohina azy io foana izahay teto an-tany, fa tonga soa eto izahay. "
Ny Theater in Afterlife dia maneho ny fitondrantenan'ny Morality
Woods: "Manao ahoana ny fiainanao amin'io lafiny io? Inona no ataonao?"
“Eny, mbola liana amin'ny teatra aho. Manana fialamboly tokoa isika, I Eritrereto hoe hiantso azy io ianao, na dia tsy izany aza. Ny zavatra rehetra ataontsika eto dia manana antony iray, manana tanjona. Ny lalao rehetra novokarina, ary ny zava-drehetra izay vita sy vita eto dia manana tanjona tena izy, tsy ny hanomezana fahafinaretana sy fialam-boly ihany.
Ohatra, izahay dia nanao kilalao izay antsoinao hoe filalaovana moraly hatrany amin'ny sehatra ambany ary mamerina ny ain'ny olona sasany hitanay amin'ny mpanatrika izahay. Manampy azy ireo hahita ny tenany amin'ny tena toetrany izany. Vokatr'izany dia manomboka mieritreritra lalina kokoa izy ireo ary manampy azy ireo handamina ny tenany sy maniry hanana fiainana tsaratsara kokoa.
Nihaona tamin'i Florenz Ziegfield sy olona maro hafa aho eto izay mbola mamokatra ilay antsoinao hoe karazana fihoaram-pefy.
(Eo amin'ny sary eo ankavanana dia mijoro eo afovoany i Ziegfield, voahodidin'ny tovovavy aminy.)
Eto isika dia mitondra ny natiora amin'ny tena heviny, ary amin'ny fomba tsara. Eto isika dia mahatsapa ny fanomezam-pahasoavana lehibe izay nomena antsika amin'ny lafiny rehetra sy amin'ny fomba rehetra. Ny karazan'olona rehetra eto dia mahita ny karazana asa mahaliana rehetra atao. Misy ny sasany mamorona akanjo tsara tarehy, ny hafa izay mamorona sary tsara tarehy, na ny toerana mety ho an'ny lalao. Misy ireo hafa izay mozika mozika tsara.
Mozika any ankoatra
Mozika eto izay manalavitra lavitra ny zavatra henonao eto an-tany – ny orkestra dia olona an-jatony maro ary samy mpanakanto ny tsirairay. Eto ny sasany amin'ireo mpamoron-kira malaza dia namorona sanganasa vaovao, mahatalanjona tokoa ka tsy afaka nilaza taminao aho. Rehefa milalao izy ireo dia azonao atao ny mahita ny atmosfera manova jiro sy loko. Fahitana mahatalanjona indrindra io. Oh, afaka nanohy nilaza taminao ny karazan-javatra rehetra aho. ”
Woods: "Inona avy ireo teatra aty? Inona no tiany? Tiany ve ny teatra eto an-tany? "
"Eny. Ny sasany dia tena toy ny teatra eto an-tany, ary ny sasany kosa lavitra be. Manana ilay karazana teatra mitovy amin'ny hitanao eto an-tany isika, miaraka amin'ny valindrihana sy valisoa vita amin'ny karipetra tsara tarehy, ary ny efitrano malalaky voatendry sy ireo karazan-javatra rehetra ireo. Ary koa, manana amfiteater malalaka misokatra amin'ny tontolo voajanahary isika. Ireto dia novokarina ho an'ny karazana kilalao. Milalao mahafinaritra hatramin'ny taloha indrindra, sy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izay nahavita kanto nanoratra sy namokatra ary nanao fihetsika. ”
Shakespeare any an-danitra
Ireo tsangambato mahafinaritra ao Shakespeare dia novokarina teto, ary inona no zava-mahaliana kokoa mbola vaovao kokoa, lalao lehibe, lalao lehibe kokoa noho ianao mahafantatra eto an-tany. Ary mbola manoratra sy mamokatra ary manao zavatra ihany koa i Shakespeare. "
Woods: "Mbola manoratra tantara an-tsehatra tahaka azy ve izy ireo?"
"Tsia Raha toa ka manana traikefa bebe kokoa amin'ny fisiana vaovao iray ianao, dia ny fomba fiainanao no miova. Raha niaina androany i Shakespeare, dia nanoratra horonan-tsarimihetsika goavana tahaka izao izy, saingy mazava ho azy fa amin'ny teny idioma maoderina izy ireo. Indraindray dia miverina eto an-tany aho ary mandeha any amin'ny teatrao, mijery ny asa sy ny lalao. Amin'ny lafiny sasany, ny ankamaroan'izy ireo dia tena ratsy. "
(Fanamarihana avy amin'i Walter Semkiw: Tamin'ny vanim-potoana ankehitriny, i Shakespeare dia teraka indray tamin'ny maha-mpanoratra tantara tsangana an'i Augustin amerikana, August Wilson, izay nantsoin'ny gazety hoe "American Shakespeare." Ity tranga ity dia hita ao amin'ny bokiko ateraka indray.)
Woods: "Efa nihaona tamin'i Shakespeare ve ianao?"
"Efa nihaona tamin'i Shakespeare aho, ary afaka mametraka ny adihevitra indray mandeha ary ho an'ny rehetra. Tsy misy isalasalana izany. Nanoratra ny tantara an-tsehatra nataony izy. Tsy midika akory izany hoe tsy nampiasa kilalao taloha izy ary manavao izany. Fa azonao atao ny maka amiko fa rehefa manana lalao Shakespeare ianao dia an'i Shakespeare izany ”
Mpihira amin'ny fiainana any ankoatra
Woods: "Nahita mpihira nalaza teo akaikinao ve ianao?"
"Marina fa nihaona tamin'ny mpihira malaza eto aho."
Woods: "Kathleen Farron. Nahita azy ve ianao? "
“Kathleen Ferrier, ny tianao holazaina. Ilay tovovavy anglisy izay nandalo taona maro lasa izay. Eny, nihaona taminy aho. Fanahy mahatalanjona izy ary manana feo mahafinaritra. Fantatrao fa ny antsasaky ny hatsarany dia tsy ny feony ihany, fa ny toetrany sy ny toetrany mahafinaritra. Nivoaka tamin'ny feony izany. Nihaino mpanakanto mahafinaritra marobe eto an-tany aho, saingy fantatro izy ireo fa toy ny saka dia any ambadiky ny sehatra, tsy mitovy amin'ny feon'izy ireo. Hafa mihitsy ity resahinao ity. ”
Nitsangana i Barrymore ary niverina avy eo.
“Miala tsiny fa tsy maintsy misaraka toy izany aho, saingy ezaka lehibe ny miresaka lava. Ho avy aho hiresaka aminao indray amin'ny fotoana hafa. ”
Ny mpanoratra tantara an-tsehatra Oscar Wilde dia mamaritra ny fiainany any an-danitra
Dimy taona taty aoriana tamin'ny Aogositra 20, 1962 dia nisy feo henon'ny lehilahy sy manankarena.
Betty Greene: "Azafady, enga anie izahay manana ny anaranao?"
"Ny anarako dia Oscar Wilde. "
Betty Greene: "Atoa. Wilde, azonao lazaina anay ve ny zavatra iainanao? Manao inona ianao?"
“Ekeko fa fanamaivanana ny angatahina hiresaka momba ny fiainany eto momba ny fiainany eto an-tany. Satria na izany na tsy izany dia fantatry ny olona mibaribary ny fiainako eto an-tany. Raha miteny aminao aho fa ny fiainako eto dia tsy mitovy amin'ny fiainako ety an-tany dia mety hihorohoro ianao. Saingy tena marina tanteraka izany. Ary tsy manenina mihitsy aho amin'izany!
Faly tanteraka sy afa-po tanteraka aho ary miaina fiainana feno fahotana matsiro. Tsy ota intsony ny maha olombelona sy ny maha voajanahary. Fa eto an-tany ho voajanahary dia ny fahotana. Eto dia mety ho mpanota ny olona iray satria voajanahary izany. Izao tontolo izao dia manana hevitra hafahafa momba ny ota. Miaina fisiana voajanahary eto aho, ary faly tanteraka. ”
Woods: "Inona no ataonao?"
“Raha ny tena izy, dia mbola manoratra ihany aho ary mbola manao fampisehoana an-tsehatra, ary matetika aho no asaina midina any amin'ny sehatra ambany hanampy.
Mahagaga, tsy isalasalana, mety hieritreritra ianao fa tokony hantsoina any amin'ny faritany ambany mba hanampy aho!
Angamba, mety kokoa aho manampy ny olona any amin'ny faritra ambany satria tsy nandroso fatratra ny tenako! Fa raha ny tena izy, tena mifanaraka amin'ny olona rehetra aho. Ny saiko, matoky aho, manome ahy fidirana na dia tsy manome laza tsara aza aho! Tsy manahy ahy ny lazako, fa toa manahy ny helo amin'ny olona maro eo anilanao!
Vola be no nalaza hatramin'ny nahafatesako mihoatra noho ny hatramin'izay dia afaka nanazava tamin'ny piano aho, izay milaza fa tena mahomby ny fahotana. "
Betty Greene: “Misokatra malalaka foana ny sainao, sa tsy izany?”
“Vonona handray aingam-panahy foana aho. Eny tokoa, mety hiteny aho fa ny sangan'asa nahomby indrindra nataoko dia ny fisian'ny saiko misokatra, ary vokatr'izany dia betsaka ny zavatra narotsaka avy tamin'io aingam-panahy io - izay tena nahomby tokoa.
Azoko antoka fa raha tsy noho ny fiheverako avo loatra dia tsy ho nanana ny sasany tamin'ireo asa mahomby vitako ianao. Saingy, mazava ho azy, izany rehetra izany dia olana amin'ny olona maro. Ny poizina voalavo an'ny lehilahy iray dia henan'olon-kafa.
Olona maro tokoa no niaina teto an-tany noho izy ireo tsy afaka ny tsy hikoropaka tanteraka. Tsy mety mandray anjara amin'ny fivoriana toy izany aho. Izany no saintsainiko satria hisy hatrany olona hilaza hoe: Ahoana no ahafantarantsika fa Oscar Wilde izany?
Ary noho izany dia antenaina hiverina aho fa mitovy, miaraka amin'ireo karazan-javatra antenaina amiko. Ho tombontsoako no anaovako izany satria fantatro ry malala, miady mafy mafy ianao handresy lahatra. Ary raha afaka manampy anao handresy lahatra aho, dia hanao asa tsara aho, ary mety hamafa ny faritra sasany amiko! ”
Betty Greene "" Atoa. Wilde hatramin'ny naha-teo anilanao, efa nianatra zavatra ve ianao? "
"Olona hafahafa aho raha tsy nianatra zavatra iray taorian'izay. Samy mianatra daholo isika rehetra na tsia. Na mpianatra isika na tsia dia tsy mianatra isika, na ratsy toy inona aza ny mpampianatra. "
Betty Greene: "Azonao ambara ve ny fandehanao?"
"Maty tahaka ny olon-drehetra aho. Raha ny marina dia tena nihaona tamin'ny reniko aho. "
Woods: "Ary ahoana no nahitanareo zavatra tany?"
Ny olona dia mitovy amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana, ao anatin'izany ny fisehoany
"Eny ary, mazava ho azy fa tsy afaka mankany amin'ny firenena hafahafa ianao, raha tsy mahita ny tena fahasamihafana. Nefa ny zavatra mahagaga sy mahaliana dia mitovy ny olona. Ny toe-javatra dia mety samy hafa, fa ny olona, ​​misaotra an'Andriamanitra, dia mitovy.
Mbola nitovy ihany ny endrik'izy ireo. Mbola mitovy ihany izy ireo. Ary vokatr'izany dia mahatsapa ho ao an-trano ny olona. Nihaona tamin'ny olona maro izay tiako aho ary maro ny olona tsy tiako sy nianatra nidera noho ny antony samihafa.
Oscar Wilde dia mandeha any amin'ny sehatra maro samihafa ao amin'ny Tontolon'ny Fanahy
Ary nanao dia be aho, nandeha tany amin'ny toerana maro, sehatra maro, firenena maro raha te hiantso azy ireo toy izany, satria amin'ny heviny.
Tsy misy ny sakana, ny vato misakana ihany ny an'ny tena ao anatiny, ary ny sain'ny tena. Ny sakana misy eo amin'ny fifandraisan'olombelona sy ny olona dia ao anatiny. Namboarin'olombelona izy ireo. Ny iray mianatra manilika azy ireo.
Rehefa teto ny iray na dia nandritra ny fotoana fohy aza dia misy mahatsapa tena fa anisan'ny iray hafa isika. Ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny farany dia manomboka mitambatra, na dia mitazona ny maha-izy azy sy ny maha-izy azy manokana aza izy ireo. Isika rehetra dia manomboka mitambatra mandra-pahatonga antsika hirindra ary vokatr'izay dia miaina ao anaty filaminana isika, ary milamina ary mirindra, izay ahafahan'ny tsirairay sy ny olona liana, toy ny misy azy.
Ny sasany mahatsapa ny faniriana ary mila miasa amin'ny fomba samihafa. Ny hafa tsy. Tiako ny manohy manoratra, satria ny soratra dia, amin'ny ankapobeny, ny fiainako.
Betty Greene: "Ny fitsarana anao dia efa navoaka imbetsaka."
"Eny, eny, fantatro. Io no ampahany tena nahomby indrindra tamin'ny asa nataoko. "
Betty Greene: "Manantena aho fa manenina daholo ny rehetra rehefa mandalo izy ireo. Manenina ve ianao, angamba zavatra tsy nataonao fony ianao teto an-tany? "
“Ny nenina voalohany nataoko dia ny tsy nijanonako ela intsony teo anilanao! Mbola nanana faniriana aho. Mbola te hanoratra bebe kokoa aho. Te hamerina ny tenako aho, ary hafahafa toa izany, eo amin'ny fiarahamonin'olombelona. Tsy hoe nahatsapa ho lasa ivelany tanteraka aho. Saingy tsy dia nisy dikany ahy ny nieritreritra fa afaka mamerina ny toerana taloha misy an'izao tontolo izao aho. Fa efa ela be toy izany. Nanomboka teo dia niova aho ”
Betty Greene: "Efa nihaona tamin'i Bernard Shaw ve ianao?"
"Oh, nihaona tamin'i Shaw aho. Lehilahy iray! Karazana tsy mahazatra. "
Ny zavaboary dia any amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana, saingy tsy misy pesta
Betty Greene: “Manao ahoana ny eo anilanao. Ny fiaramanidina ianao. Azonao lazaina aminay ve izany? Manana teatra ianao, sa tsy izany? Mbola manoratra kilalao amin'io lafiny io ve ianao? ”
“Oh, mbola manoratra ihany ny iray. Mbola mitohy ny iray. Ny tontolontsika, amin'ny lafiny sasany, tsy isalasalana fa efa henonao, dia mitovy amin'ny Tany misy anao. Manana ny toerana rehetra isan-karazany izahay, izay efa nahazatra anao, ary tsara tarehy kokoa aza. Araka ny fantatrao, misy ny natiora eto, fa ny lafiny maha-tezitra ny natiora dia tsy misy amintsika.
Ohatra, tsy manana bibikely, toy ny lalitra isika, ary ny zavatra manelingelina rehetra izay noforonin'ny natiora hanelingelina ny olona. Toa nanjavona ireo zavatra ireo, soa ihany. Toa manana ny hatsarana sy ny hakanton'ny natiora rehetra isika fa tsy misy ny fahasosorana madinidinika rehetra. Tsy misy lalitra mifindrafindra intsony! ”
Tanàna sy biby any an-danitra
George Woods: "Inona ireo trano ireo?"
"Misy karazan-trano rehetra, saingy eo amin'ny sehatra iainako dia izy ireo dia kanto sy tsara tarehy."
George Woods: "Misy tanàna na tanàna ve?"
"Eny, afaka miantso azy ireny ianao. Misy tanàna izay tsy misy olona an'arivony miaina sy miaina ny toeram-ponenany, saingy tsy mitovy, ary, amin'ny lafiny sasany, toy ny taloha. Tsy manana fiara izahay, fa mbola misy soavaly foana.
Mieritreritra aho indraindray fa mihoatra lavitra noho ny olombelona ny biby. Farafahakeliny dia manaraka ny fiheviny ara-boajanahary izy ireo ary tsy izy ireo, izay heverina fa heverina fa misy zavatra tsy mety. "
Betty Greene: "Manana trano hipetrahanao ve ianao?"
Ny iray mamorona ny tranony manokana any an-danitra
"Eny. Trano tsara tarehy. Trano iray ao am-poko. Saingy indray, amin'ny lafiny iray, heveriko fa noho izaho no namorona azy io. Raha tsy nahatsapa akory aza aho dia namorona izany aho talohan'ny nahatongavako tamin'ny eritreritro. "
Betty Green: "Manana zaridaina ve ianao?"
"Manana zaridaina aho. Tsy dia lehibe loatra, fa ampy. Tsy olona iray ho an'ny fiainana an-tany aho. Nankasitraka ny natiora aho, saingy naleoko nijery ny natiora lava fa tsy teo ambanin'ny jirony.
Tsy maintsy mandeha aho. Andriamanitra anie hitahy anao."
Stephen Fry amin'ny maha-Teraka tany Oscar Wilde
Ny mahaliana, Oscar Wilde dia fantatra amin'izao fotoana izao tahaka ny mpilalao britanika, mpanoratra ary mafana fo, Stephen Fry. Kitiho ny sary mba hanitarana azy.